Ogaden News Agency (ONA) – Xuska Sanadguurada 31aad ee ONLF oo laga xusay Helsink-Finland+Sawiro
Xuska Sanadguurada 31aad ee ONLF oo laga xusay Helsink-Finland+Sawiro
Maanta oo ay taariikhdu tahay 29.8.2015 waxaa magaalada Helsinki ka dhacay xuskii 31 guuradii JWXO. Qabanqaabada xafladan ballaaran waxaa munaasabadeeda lahaa Jaaliyadda Ogaadeeniya ee Finland iyo OYSU Finland. Xuskani oo si wanaasan loo agaasimay waxaa ka soo qaybgalay ummadda Ogaadeeniya iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Helsinki iyo nawaaxigeeda.
Xaflada waxaa lagu soo bandhigay khudbado dhaxalgal ah oo ay soo jeediyeen indheergaradka, waaya aragga, hooyooyinka iyo dhallinyarada Ogaadeeniya, khudbadahaasoo intooda badan taabanayey halganka xornimo doonka ah ee Ogaadeeniya. Waxaa kaloo aad loogu dheeraaday Ogaadeeniya oo xorowda in ay la mid tahay ummadda soomaaliyeed oo xorowda.
xafladda oo gunaanadkeedu ahaa halgan hagar la’aan ah oo aan loo kala harin.
Isla maanta ayay Jaaliyadda Soomaalida Ogaadeeniya ee Finland dooratay maamul cusub. Munaasabadan waxaa ka soo qaybgalay xubnaha jaaliyadda, waxayna doorteen maamul cusub, kaasoo hawlgeli doona 2015-2016.
Aayada qur’aan ah ka dib waxaa shirka waxbixin ka soo jeediyey gudoomiyihii hore ee jaaliyadda mudane Muxudiin, kaasoo ka warbixiyey waxqabadkii sanadkii tegey. Dardaaran dheer ka dib waxaa khudbadii lagu wareejiyey gudoomiyaha cusub mudane Cabdirashiid, kaasoo isaguna halkaa khudbad ka soo jeediyey una mahadceliyey maamulkii hore, codsadayna wadashaqayn.
Xil wareejinta ayaa ku dhamaatay jawi aad u wanaagsan.